July Dream: January 2015
မိဘများထံမှ သားသမီးအတွက် အကောင်းဆုံးအမွေမှာ မိဘများအနေဖြင့် သားသမီးများ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံရမည့် လုပ်ရပ်မျုိးကို ရှောင်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဇန်န၀ါရီ ၁၇ ရက် ၂၀၁၅ - ဗိုလ်ချုပ်နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လူထုဟောပြောပွဲ ရမည်းသင်းမြို့နယ်
ဒေါ်စုက အဲဒီလိုလေး ပြောသွားတဲ့ သတင်းကို 7Day Daily Websiteမှာ ရေးထားတယ်။ အဲဒါကို အမည်မှာ ဦး တပ်ထားလို့ အသက်ကြီးပြီးလို့ ထင်ရပေမယ့် အဆံချောင်နေတဲ့ ဦးသန့်ဇင်ဆိုတဲ့လူက မှတ်ချက်ဝင်ရေးတယ်။ သူ ရေးတာတွေကို လွန်တယ်လို့ မြင်မိလို့ ကျွန်တော်က တုန့်ပြန်ရေးတယ်။ ဒါမျိုးဟာ ငြိမ်ခံမနေပဲ တုန့်ပြန်သင့်တယ် ထင်လို့ သူ့မှတ်ချက်တွေကို အကြောင်းပြန်တာပါ။ ဒီလူ့အတွက် အကျိုးထူးတာ မထူးတာကို သိပ်တော့ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
အဲဒါလေးတွေကို တခြားသူတွေလည်း ဖတ်ရအောင် မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်းပဲ ကူးယူလာပြီး အခုမှတ်စုလေး လုပ်ပါတယ်။ မှတ်စုထဲကနေ ဖတ်တဲ့သူတွေ စာဖတ်ရတာ အဆင်ပြေအောင် အဖြတ်အတောက်လေးတွေတော့ ပြင်ပေးထားပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ခံစားချက်အလျှောက် တုန့်ပြန်ချက်တွေ ပြင်းထန်တာတွေလည်း ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဦးသန့်ဇင်ရဲ့ တချို့စာတွေက သတင်းထဲကနေ တိုက်ရိုက် ပြန်ကူးထားတွေပါ။ တချို့စာတွေက တခြားသူရဲ့ မှတ်ချက်ကို သူ လိုရာဆွဲတွေးဖို့ မှီငြမ်းထားတာတွေပါ။
U Thant Zin: ဘယ်မိဘမှ ကိုယ့်သားသမီးကို နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အသုံးချတာကိုခံပြီး ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ထောင်ထွက် ဝေလေလေဘဝမျိုးကို ရောက်စေချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်သားသမီး ကို ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့သားသမီးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်မှာပဲ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေစကားကို နားယောင်ရင် ကိုယ့်သားသမီးတွေပဲ ရေတိမ်နစ်မယ်။
Khun July: သေချာတာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်သားသမီးကို မပျက်ဆီးစေလိုတာ မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲက စေတနာပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ် မပျက်ဆီးရလေအောင် လက်ရှိအချိန် မိဘဖြစ်နေတဲ့သူတွေကလည်း အနေအထိုင် အပြောအဆို အပြုအမူ ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ သားသမီးတွေဆီမှာ အရိပ်မထိုးရအောင် နေထိုင်သင့်တယ် မဟုတ်ဘူးလား ခင်ဗျ။
ကိုယ်ဟာ သမိုင်းရဲ့ တရားခံကြီး၊ ကောင်းတဲ့စေတနာ ပါပေမယ့် လုပ်ရပ်တွေ မှားခဲ့လို့ တိုင်းပြည်ကို နှစ်နဲ့ချီ အချိန်ယူ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေ မသိစေချင်ရင် တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းအောင် နေထိုင်ရမယ်လေ။
အတိတ်ကို သင်ခန်းစာ ယူပြီး ပြင်သင့်တာကို ပြင်ရမယ်။ မှားတာတွေကို ဝန်ခံရဲရမယ်။
U Thant Zin: အောင်ဆန်းစုကြည် လမ်းညွှန်ထိန်းကျောင်းမှု ကောင်းလွန်းလို့ သူသားနှစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂါတ်က သိပ်လှပနေတယ်လို့ ဆိုချင်တာလား? ကိုယ့်သား ၂-ယောက်ကိုတောင် နိုင်ငံအကျိုးပြုအောင် မသွန်သင်နိုင်ပဲ သူများသားသမီးတွေကို ကိုယ်ချင်းမစာ လမ်းမပေါ်တက်ပြီး ဆန်ဒပြဖို့ လိမ်လည်ကောက်ကျစ်နေတယ်။ မင်းသားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်မပျက်ဆီးရလေအောင် မင်းကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်ပြီး မင်းသားသမီး မြေးမြစ်တွေ လမ်းပေါ်တက်ပြီး ဆူပူဆန်ဒပြကြလေ ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသိရအောင်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ရဲပဲ သူများသားသမီးတွေကို ချောက်ထဲတွန်း မပို့နဲ့။ မင်းတို့လိုခွေးတွေကတော့ အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ချီးစားပါဆိုရင်တောင် မြိန်ရည်ရှက်ရည်စားမဲ့ ခွေးတွေပဲ။ မင်းအနာဂတ်ကောင်း သွားအောင် လမ်းပေါ်တက်ပြီး အော်ကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်သူမှားလဲ သိရတာပေါ့။
Khun July: ကိုသန့်ဇင်... ဒေါသတွေ မကြီးပါနဲ့။ ဒီကွန့်မန့်တွေမှာ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ တောက်လျှောက် ဆက်ဆံတယ်။ ခင်ဗျားပြောတာ
မှန်တယ် ထင်ရင် ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားကို မှန်တယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမြင်မတူတိုင်း ရန်သူဖြစ်ရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီတသက် ထသတ်လို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။
ခင်ဗျားလည်း လူကြီးပဲဗျာ... အမည်ရှေ့မှာ ဦးတောင် တပ်ထားသေးတာပဲ။ စိတ်ရှည်ပါ။ ရည်မွန်ပါ။ စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။ ဒါကတော့
အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ရေးထားတာကို နားလည်အောင် တခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒေါ်စုပြောတာကိုလည်း နားလည်အောင် အရင်လုပ်ပါ။ မိဘက လုပ်ရမယ့် အနေအထားကို ပြောနေတာပါ။ မိဘအနေနဲ့ သားသမီး အရှက်ရမယ့် အလုပ်တွေ မလုပ်ခဲ့မိဖို့ ပြောနေတာ။ သားသမီးကို ဘာလုပ် ရမယ် ညာလုပ်ရမယ် လမ်းပေါ်တက်လာရမယ် တခွန်းမှ ပြောမထားဘူး။ ကျွန်တော်က အဲဒီလို နားလည်မိလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားက ဘယ်လို နားလည်လိုက်လဲ ကျွန်တော် မသိဘူး။ ကျွန်တော် နားလည်တာ လွဲနေရင် ခင်ဗျား ယဉ်ကျေးစွာ ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။
U Thant Zin: အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြည်သူတွေကို တိုက်တွန်းချက်ကို ကိုသိန်းထွန်းအောင်နာလည်တဲ့ အဓိပါယ်ကို ကူးပေးလိုက်တယ်။
"ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘိုးဘွားတွေကို ကဲ့ရဲ့မိတယ်ဗျ--- သူတို့သာ နေ၀င်း အာဏာသိမ်းကတည်းက ဒီမကောင်းတဲ့ စနစ်ဆိုးကြီးကို ငါ့သားမြေးတွေ လက်ထက်ထိ
ဆက်ရှင်သန်မခံနိုင်ဘူး၊ ငါသေချင်သေ ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ရင် အခုလောက်ဆို ကျုပ်တို့ ချမ်းသာနေပြီ၊ ဒီတော့ ကျုပ်တို့က ကျုပ်တို့ ဘိုးဘွားတွေကို သူရဲဘောကြောင်သူတွေ ရေသာခိုသူတွေ အဖြစ် ရှုံ့ချတယ်။ ကျုပ်တို့အလှည့်မှာလည်း ဒီလို နောင်လာမည့် သားစဉ်မြေးမြစ်က ရှုံ့ချခြင်း မခံရအောင်
တာဝန်ကျေကြဖို့လိုတယ်လို့ ဒီလိုဘဲ နားလည်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာပြောထားလဲတော့ သေချာ မဖတ်ရသေးဘူး။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ဒီလိုဘဲ နားလည်တယ်။"
အဲဒါဆို ကျွန်တော်နားလည်မှု လွဲတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကျွန်တော်ကတော့ တိုင်ပြီ ဆူပူပြီး ပြည်သူတွေ ခလေးတွေ အဖမ်းခံရ သေကြေတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဒါပါပဲ။
U Thant Zin: "ကိုယ့်သားသမီးတွေ အနာဂတ်မှာ အရှက်ရစေမဲ့ ဆူဆူပူပူတွေမလုပ် ကြပါနဲ့"လို့ပြောတယ်လို့ ခင်ဗျားက သဘောပေါက်တယ်ပေါ့။
Khun July: အရှက်ရမယ့် ဘယ်အလုပ်ကို မဆို အကျုံးဝင်တယ်။ ဒီ ဆူဆူပူပူကိစ္စ တခုတည်း မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ။ အစိုးရရဲ့ လွဲမှားတဲ့ စီမံမှုတွေ၊ အရာရှိတွေရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှူတွေ၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အာဏာ အလွဲသုံးစား လုပ်မှုတွေ၊ သူဌေးတွေရဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေ၊ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးဟာ နောက်နောင့်မျိုးဆက်မှာ အရှက်ရစေမယ့် ကိစ္စတွေလို့ ကျွန်တော်က မြင်မိတယ် ခင်ဗျ။
U Thant Zin: "မိဘများထံမှ သားသမီးအတွက် အကောင်းဆုံး အမွေမှာ မိဘများအနေဖြင့် သားသမီးများ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံရမည့် လုပ်ရပ်မျုိးကို ရှောင်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ် ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကပြောကြားလိုက်သည်။
မိမိသားသမီး၊ မိသားစုအတွက်သာ စဉ်းစားတတ်သော မိဘများအနေဖြင့် သားသမီးများအား အကောင်းဆုံး အမွေပေး လိုပါက မိမိလုပ်ရပ်ကြောင့် သားသမီးများ ဘ၀တစ်လျှောက် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံရမည့် မျက်နှာပူစေသာလုပ်ရပ်မျိုးကို ရှောင်ရှား ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး အမွေပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတိုင်း လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်
စည်းရုံးချင်ပါတယ်’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း အခြားမည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကိုမှ အားကိုးနေခြင်း မပြုဘဲ မိမိတို့ အရည်အချင်း အင်အားကိုသာ အားကိုးသည့် ပြည်သူများဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
‘‘နောက်ဆုံးပြည်သူတွေက မိမိတို့ အရည်အချင်းကိုပဲ အားကိုး။ လက်နက်ကအင်အား မဟုတ်ဘူး။ ငွေကအင်အား မဟုတ်ဘူး။ အရည်အချင်းက အင်အား၊ အရည်အချင်းအင်အားကို အားကိုးတဲ့ ပြည်သူတွေ ရှိပြီဆိုရင် ကျွန်မတို့တိုင်းပြည် အနာဂတ်စိတ်ချရပြီ’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ဒေါ်စုပြောထားတဲ့အထဲက အရေးမကြီးတာတွေကို ဖယ်ထုတ်ထားတာ။ "မိမိလုပ်ရပ်ကြောင့် သားသမီးများ ဘ၀တစ်လျှောက် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံရမည့် မျက်နှာပူစေသောလုပ်ရပ်မျိုး" ဆိုတာ ဘာလဲ? စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ သူမြန်မာပြည်ပြန်လာကတည်းက အစိုးရကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ ဆန့်ကျင်မှုတွေချည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ လူတိုင်းကတော့ ကိုယ်လုပ်တာကိုပဲ မှန်တယ် ထင်ကြတာ သဘာဝပဲ။ အဲဒိတော့ သူဘာလုပ်စေချင်တာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည်လေ။ သူလုပ်ခဲ့သလိုပဲ လုပ်ဖို့ စကားကို ဝေ့ဝိုက်ပြီးပြောတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ လိုရင်းကတော့ အနာဂတ်မှာ အပြစ်တင်ခံရလွတ်အောင် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတာပဲ။
လူတွေလမ်းပေါ်တက်ပြီးဆူပူကြ ဖမ်းကြ ပစ်ကြ သေကြ အဲဒါတွေဟာ ကောင်းသလား? အဲဒီမြှောက်ပေးတဲ့လူတွေက ဖမ်းကြ ပစ်ကြရင် တစ်ကောင်မှမရှိဘူး။ အဖမ်ခံစရာ သေစရာရှိတော့ ခလေးတွေခံရတာ။ ခင်ဗျားသားသမီးတွေ အဖမ်ခံ အသခံနိုင်သလား? ဖြေပါ။
အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်လို့ ခင်ဗျားယုံကြည် လား? ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ပဲ တခြားမိဘတွေကို ဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါ့မလား? ဖြေပါ။
မနေ့ကပဲ မြန်မာပြည်ဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက် ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီး လူထုကိုပြောတယ်။
အမေရိကန်က လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ပြည်သူတွေဖုန်သာမက ပြည်ပခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ဖုန်တွေကို ခိုးနားထောင်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေတဲမှာ ဒရုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့ အပြစ်မဲ့အရပ်သားတွေသေရတယ်။ အမေရိကန်လူမဲလူငယ်တစ်ယောက်ကို လူဖြူရဲအရာရှိကပစ်သတ် တာ။ ဘင်လာဒင်ကို အရှင်ဖမ်းပြီး တရားစီရင်လို့ရပါလျက်နဲ့ အသေပစ်သတ်တာ ဒါတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တာတွေ မဟုတ်ဘူးလား?
အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါတွေတော့မပြောပဲနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအားလုံးကို နိုင်ငံသားမပေးတာကိုကျတော့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး အသံကောင်းဟစ်တယ်။ KIAဗိုလ်လောင်းတွေကျတယ်။ မင်္ဂလားယူပြီး ဝမ်းနည်းသလေး ဖြေရှင်းချက်ပေးလေး တက်အော်တယ်။ KIAလို မတရားအသင်းကို ထောက်ခံအားပေးရင် ပါတီကို ဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို သူမသိဘူး။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာဥပဒေတင်ပြီးလို့ တင်ပြီးမှန်တောင်သူမသိဘူး။ သူပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်နဲ့သာသွားရင်း ထိုင်းထက်ဆိုးမယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည်က ချီးစားဆိုရင် စားမဲလူတွေကလည်း အများကြီးပဲ။
ခင်ဗျားတို့ကို သဘောပေါက်စေချင်လို့ အချိန်ကုန်ခံပြီး ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြနေရတာပဲ။ တိုင်းပြည်ကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ တိုးတက်စေချင်တယ်။
Khun July: ၁။ ဘင်္ဂလီကိစ္စမှာ နိုင်ငံသားပေးရမယ်လို့ ဒေါ်စု တခါမှ မပြောခဲ့ဘူး။ သူ ပြောခဲ့တာက ဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်ရမယ်။ ဒီလူတွေဟာ တရားမဝင် ကူးဝင်လာတဲ့ တဘက်နိုင်ငံသားလား။ ဒါဆိုရင် နယ်နှင်ပေါ့။ ဒီမြေဒီရေမှာ ဘိုးဘွားဘီဘင်က နေထိုင်လာတဲ့သူလား။ အဲဒါဆိုရင် လက်ရှိတည်ဆဲ ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေါ့။ အဲဒီ ရခိုင်က ဘင်္ဂလီတွေကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး White Card ပေးခဲ့တာက ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျား သိရင် ထုတ်ပြောပြပါလား။ White Card ကိုင်ဆောင်သူတွေ မဲပေးပိုင်ခွင့် ပေးရမယ်လို့ ပြောတာလဲ ဘယ်သူလဲ။ ခင်ဗျား သိရင် ပြောပြလိုက်ပါအုံး။
၂။ KIA ကိစ္စမှာ ဒေါ်စုက ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောတာဟာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ပေါ်လစီကြောင့်လို့ ကျွန်တော်က မြင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးတွေ အတွက် ကချင်ဘက်ကို ဝမ်းနည်းစကား ဆိုပေးတယ်ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက လူတွေ မြင်တာကလည်း တပ်မတော်က ကချင်ဘက်ကို ဘာမပြောညာမပြော ဒုံးကျည်နဲ့ ထုလိုက်တာကိုးဗျ။ စစ်တပ်ဘက်ကိုကျတော့ မပြောဘူးလား ဆိုပြီး ကလေးအထာနဲ့ လာ စိတ်မကောက်ပြနဲ့အုံး။ ကြိုပြောထားတာ။ ဒေါ်စုက ဖေဖေ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကို အမြင်ရှင်းတယ်။ ချစ်ခင်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ ပြောခဲ့တာ ခဏခဏပဲ။ ခင်ဗျား မဖတ်မိလို့ မမြင်မိတာက တပိုင်းပေါ့လေ။
၃။ အခြေခံဥပဒေမှာ မတရားအသင်းကို ထောက်ခံအားပေးရင် ပါတီ ဖျက်သိမ်းရမယ်။ အိုခေ ဟုတ်ပြီ။ အခု အစိုးရခေတ်မှာ KIA ကို မတရားအသင်း ကြေညာထားလား။ အဲဒါကိုတော့ ကျွန်တော် သေချာ မသိပါ။ အကယ်လို့ မတရားအသင်း ဖြစ်နေရင် သူ့ပါတီကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အစိုးရက လုပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော် ဘာတခုမှ မပြောပါဘူး။
အေး... ဒါပေမယ့် တခုတော့ ပြောစရာ ရှိလာမယ်။ အခြေခံဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထားတာလေး တခုပေါ့။ နိုင်ငံတော်အလံမှာ ရေးခြစ်တာတွေ အမှတ်အသား ပြုလုပ်တာတွေ မလုပ်ရဘူး။ လုပ်ရင် ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကာချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ကို အခြေခံဥပဒေအတိုင်း ထောင်ချပေးပါ။ အဲဒီလိုပဲ အခမ်းအနားတခုမှာ နိုင်ငံတော်အလံကို ဇောက်ထိုးလွှင့်ထူခဲ့တဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးပါ။ မျှမျှတတပေါ့ဗျာ။
U Thant Zin: အောင်ဆန်းစုကြည် သူ့သား ၂-ယောက်ကိုတောင် မထိန်းသိန်းနိုင်ပဲ ခလေးမအေတွေကို မြှောက်ပေးနေတာ မင်းသိသွားပြီလား။ မတရားအသင်းကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်ရင် ပါတီကိုဖျက်သိမ်းရမယ် ဆိုတာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေဥကဌကြီးက သိပုံမရဘူး။ KIA ဗိုလ်လောင်းတွေသေတော့ ဝမ်းနည်းတယ်။ ဖေဖေတပ်မတောသားတွေ အတုံအရုံးကျ တာကျတော့ ဝမ်းနည်းရကောင်းမှန်မသိတဲ့ ခွေးမ။ မင်းလည်း နောင်လာနောက်သားတွေ အကဲ့ရဲ့မခံရအောင် လမ်မပေါ်တက်ပြီး ဆန်ဒပြဦးလေ ဘာဖြစ်သွားမလဲ သိရအောင်။ မင်းတို့အမေခေါ်နေတဲ့ လင်တရူးမကြီး အိုဘားမားလာတုန်းက မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဖင်ယားပြီး တက်မလုပ်ရုံတမယ် စောက်ရှက်မဲတာ မင်းတို့ မရှက်ကြဘူးလား? ငါတို့ကတော့ International Prostituteကြီးလို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ ဒါကြီးများ သမတဖြစ်ရင် မြန်မာပြည် ဖာနိုင်ငံဖြစ်ပြီ။ အလံစောက်ထိုးတင်တာ ဦးသိန်းစိန်တို့ ကာချုပ်တိုလား? တင်တဲ့လူကို သွားအရေးယူလေ။ ပြောစရာမရှိ ဆင့်တန်ဆာ အနာလုပ်နေတယ်။ မင်းကတော့ အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးကျွေးရင်တောင် အိုက်စကရင်အမှတ်နဲ့ စားမဲ့အကောင်ပဲ။ မကျေနပ်ရင် လမ်းပေါ်တက် ဆန်ဒပြကြ ဘာဖြစ်သွားမလဲ သိရအောင်။ မင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှင်းပြနေလို့လည်း ကျွဲပါးစောင်းတီးပဲ။ အချိန်ကုန်တယ်။
Khun July: တေဇတို့ တောင်တက်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံအလံ ယူသွားဖို့ လုပ်တယ်။ အဲဒီအလံမှာ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကာချုပ်ကြီးတို့ လက်မှတ်ထိုးမိတယ်။ ခင်ဗျား ဒါတွေ မသိဘူး မဟုတ်လား။ သိရဲ့သားနဲ့ မသိချင်ဆောင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကိုများ ဆင့်တန်ဆာကို အနာလုပ်တယ် ထင်တယ်။ ခင်ဗျားကမှ တဘက်ပိတ် ဖြစ်နေတာ။ ကျွန်တော် ပြောတာက အကျိုးအကြောင်း ပါတယ်။ ခင်ဗျားလို့ အားရှိရှိ ဖင်ပိတ်ငြင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။
အလံဇောက်ထိုးတင်တာက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီလေ။ သူတို့ပါတီ အခမ်းအနားမှာကို တင်တာ။ ခင်ဗျားက NLD ပါတီအကြောင်းပြောတော့ ကျုပ်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအကြောင်း ပြန်ပြောတာ။ ဟဲဟဲ အနာပေါ် ဒုတ်မကျစမ်းပါနဲ့။
အခုထိ ဒေါ်စုက ကျုပ်တို့ကို လမ်းပေါ် မတက်ခိုင်းဘူး။ ခင်ဗျားပဲ ကျုပ်တို့ကို လမ်းပေါ် တက်ကြည့်ခိုင်းနေတယ်။ တကယ်တော့ ခင်ဗျားကမှ ရှက်သင့်တာဗျ။ ခင်ဗျားရဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးချင်နေတဲ့ စိတ်ရင်းက ဖုံးမနိုင် ဖိမနိုင်ပဲဗျာ။
ကျုပ်က မြန်မာလို ရှင်းရှင်းလေး ရေးပြထားတာကိုမှ ခင်ဗျား နားမလည်တာ အံ့သြတယ်။ တကယ်တော့ ခင်ဗျားက စာမဖတ်တတ်တာဗျ။ ဆယ်တန်းရော အောင်ရဲ့လားဗျာ။ အဲဒါများ ကျုပ်ကိုများ ကျွဲပါးစောင်းတီးတဲ့။ ခင်ဗျားကို ပလာတာ မကျွေးချင်ဘူးဗျာ။
အခုချိန်အထိတော့ သူ ဆက် မရေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဘာမှ ထပ်မရေးဖြစ်သေးပါ။ သူသာ ဆက်ရန် ရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်လည်း ဆက်ရန်တွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်ကြောင်း...
Posted by JulyDream at 11:39 AM No comments:
Managed your windows
အရင်ရုံးတုန်းက အိုင်တီလုံခြုံရေးပေါ်လစီအရ ဘယ်ကွန်ပျူတာမဆို သုံးနေတဲ့လူ အနားမှာ မရှိနေရင် Lock ချခိုင်းထားတယ်။ အိမ်သာ သွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနွေးသွားယူတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စက်နားမှာ ကိုယ်မရှိရင် စက်ကို သူများ ဝင်သုံးလို့ မရအောင် password နဲ့ Lock ချရတယ်။
ကိုယ့်အဖွဲ့က လူတွေက အများအားဖြင့် အဲဒီလို မလုပ်ကြဘူး။ အဲဒါကို ပညာပေးချင်တာနဲ့ သူတို့ ဖွင့်သွားတဲ့ စက်ကနေ အီးမေးလ်တစောင် ရိုက်လိုက်တယ်။ အီးမေးလ်ထဲမှာ ပေါက်တက်ကရတွေ ရေးပြီး သူတို့ကြောက်ကြတဲ့ အပေါက်ဆိုးတဲ့ လူကြီးဆီကို လိပ်မူပေးထားတယ်။ Send ဆိုတာကိုတော့ မနှိပ်တဲ့အတွက် စာကတော့ တကယ်မပို့ဘူးပေါ့။ ဒီအတိုင်းလေးပဲ စာတွေရိုက်ပြီး Lock ချထားခဲ့ပေးတယ်။ သူတို့ ပြန်လာလို့ ဝင်ကြည့်ရင် သူ့တို့ ကွန်ပျူတာမှာ အဲဒီ စာက အရံသင့် ကြိုနေပြီလေ။ ပြီးရင်တော့ သူတို့ကို အဲဒါမျိုးတွေ သတိထားဖို့ သွားပြောပြပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ ခဏခဏ ကြုံပြီးတဲ့နောက် သူတို့လည်း ကွန်ပျူတာကို Lock ချတဲ့ အကျင့်ရသွားတယ်။
အခုတလော Facebook မှာ တကယ့်သုံးတဲ့သူ ကိုယ်တိုင် ဟုတ်မဟုတ် မသေချာတဲ့ အကောင့်တွေနဲ့ ပွဲဆူစေတဲ့ စာတွေကို ရေးနေတာ တွေ့နေရတော့ အဲဒါလေးကို အမှတ်ရမိသွားတယ်။ အညာသားတွေကို ပါးချပစ်ချင်တာတို့... လေးဖြူနဲ့ စိုင်းစိုင်းကြား ရန်တိုက်ပေးနေတဲ့ စာတွေ တင်တာတို့... အစုံပါပဲ။
Facebook ခေတ်မစားခင် GTalk တုန်းကလည်း အဲဒီလိုကိစ္စတွေ ရှိဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်အကောင့် မဟုတ်ပဲ Log off လုပ်ဖို့ မေ့သွားတဲ့ သူများအကောင့်ကနေ ဝင်ပြီး တခြားသူတွေကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောတာတွေ၊ တဘက်လူက အထီးအမ ဘာမှန်း သေချာမသိပဲ တွေ့ရာလူကို ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း ပြောတာတွေ စုံပလုံစိနေတာပဲ။ ခံခဲ့ဖူးပေါင်း မနည်းတော့လည်း ဒါမျိုးတွေက ကိုယ်တွေ့တွေပေါ့လေ။
ပြောချင်တာကတော့... စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့... အသိဥာဏ်ပုံမှန် ရှိနေတဲ့ လူတယောက်အဖို့ ကိုယ့်သိက္ခါကျစေမယ့် ကိုယ့်ကို ဝိုင်းပြီး ဆဲမယ့် ကိုယ့်အရှက်ကို ကွဲစေမယ့် စာမျိုးပုံမျိုးကို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ တင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သူ့ကို အပုတ်ချချင်လို့ နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးချင်လို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဓါတ်ပုံကအစ ကွက်တိတူအောင် လုပ်ထားတဲ့ အကောင့်အတုကနေ ဒါမှမဟုတ် တကယ့်အကောင့်ကိုပဲ သူမရှိတဲ့အချိန် ဝင်သုံးပြီး ပေါက်တက်ကရတွေ တင်တာမျိုးနဲ့ လုပ်ကြံနိုင်ပါတယ်။ အမြင်ကတ်လို့ လုပ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို အပျော်အပျက် စ နောက် ချင်လို့ လုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုတင်လိုက်တဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး အချင်းချင်း ဒေါသတွေ မဖြစ်နေကြပါနဲ့။ ဆဲဆို မနေကြပါနဲ့။ နှစ်ပြားမတန်အောင် ဝိုင်းပြီး အပြစ်တင် အပုတ်ချ မနေကြပါနဲ့။ မဆိုင်တဲ့သူခမျာ ဘုမသိဘမသိပဲ မိအေး နှစ်ခါမက နာစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တကယ့်တရားခံအစစ်က နောက်ကွယ်ကနေ တခွိခွိ ရယ်နေလောက်ပါပြီ။
ပြတင်းပေါက် ဖွင့်လိုက်ရင် အေးမြတဲ့ လေပြည်တွေ ဝင်လာသလို အမှိုက်သရိုက်တွေလည်း ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်မလား မဖွင့်ဘူးလား ဆိုတာတော့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ။ ဖွင့်သင့်သလောက် ဖွင့်ပြီး ပိတ်သင့်သလောက် ပိတ်ထားနိုင်ပါစေ...
Posted by JulyDream at 11:40 AM No comments: